INkosana uHarry kunye noMeghan beThunyelwe nguDrones: Iindaba eNigeria naseBeyond
PU-rince Harry kunye noMeghan Markle bahlanjelwa yi-drones, i-Banky W ihlangana nokubulawa kweKaduna esemazantsi, uTrump elungiselela ukujolisa kwimithetho yokhuseleko kwimithombo yeendaba, I-Premier League ibuye ngoJuni 17. Hlala wazi kunye neRave News Digest yethu eshwankathela ezintlanu zehlabathi ezishushu kakhulu. Iindaba ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
Imvumi yaseNigeria, Bankole Wellington, eyaziwayo ngokuba Yibhanki W, udibene nabanye abantu baseNigeria ukukhalaza ngokubulawa kwabantu okuqhubekayo e-Kaduna eseMazantsi.
Uye waya kwi-Twitter elila malunga nemeko yangoku yezinto. Wathumela i-tiles:
“Eli lizwe liyakhathala. EMelika, lucalucalulo - Amapolisa amhlophe abulala abantu abantsundu abangenazo izixhobo. ENigeria, apho sabelana khona ngombala wolusu olufanayo, ubuzwe kunye nohlanga. Rhoqo emva kweveki kukho elinye ibali lokubulawa kwabantu abaninzi; Kaduna namhlanje, uJos kusasa. Intiyo engaka. Ndidiniwe. Ubumnyama obuninzi kakhulu. Ubundlobongela obungaka kunye nentiyo. Sivile ukuba abantu babulawa kakhulu, siye saba manzi kuyo. Usuku olwahlukileyo, amaxhoba ahlukeneyo, ibali elinye, ii-hashtag ezifanayo ... " Iindaba zomntu odumileyo waseNigeria
1. INkosana uHarry kunye noMeghan Markle bakhuliswa ekhayeni labo le-LA
Meghan Markle kunye nePrince Harry
INkosana uHarry kwaye Meghan Markle banike ingxelo emapoliseni, iidrophisi ezindizayo ebehamba ejikeleza ikhaya iiveki. Esi sibini sichaze ubuncinci iidroni ezintlanu ezibhabha ngezantsi njengeemitha ezingama-20 kubandakanywa echibini kunye nonyana wabo omncinci, u-Archie. INkosana uHarry kunye noMeghan
Iingxelo zikwachaza ukuba le drones yinxalenye yezinto ezoyikisayo odibana nazo lo mbhangqwana ukusukela oko wangena phakathi Ikhaya laseLos Angeles Yeemovie movie UTyler Perry. UHarry noMeghan drones
Kubandakanya ukubalandela kunye nokuyicekisa yonke imihla ukuphuma kwabo, ukubashiya bekrwitshiwe ezimotweni ziqhutywa ngempazamo njengoko bezilandela. Isiganeko esinye siphantse sabangela ingozi, eyayingozi kakhulu, yothuswa kwaye yoyikisa, " umthombo uthe.
2. EGhana: Usana olusizelwe ngecandelo laseCaesarea lisuka ku-COVID-19 umama onencasa uvavanyiwe
Iqela lezonyango, isiguli, kunye nokuhlinzwa kwasemva komntwana.
Umntwana oyinkwenkwe ogama umama owayenesigulana esine-COVID-19 isiguli kwaye wangeniswa ngecandelo laseCaesarea kwisibhedlele sase-Apinto kuRhulumente waseTarkwa Nsuaem kwingingqi yeNtshona eGhana kwiveki ephelileyo kuvavanyo lokuba asinaso esi sifo. Iindaba zomntu odumileyo waseNigeria
Umama ngoku sele evavanyiwe ukuba akasenaso esi sifo kodwa ogqirha balinde uvavanyo lwesibini lokuqinisekisa ukuba usifumene ngokupheleleyo isifo, ngokukaGqr. UJoseph Darko, Ingcali ye-Obstetrician kunye noGynaecologist okhokela kwiqela lokuhambisa.
3. Abasebenzi basekhaya eMzantsi Afrika banokubuyela emsebenzini phantsi kwenqanaba 3
UMphathiswa wezoRhwebo naMashishini, Ebrahim Patel, ngexesha lenkomfa kazwelonke ye-National coronavirus Command Council (NCCC) ngoLwesine we-28 kaMeyi, yanika into eqhubekayo kubasebenzi basekhaya ukuba babuyele emsebenzini phantsi kwenqanaba 3 lokuvalela ngaphandle. UPatel uthe ukubuya kuvunyelwe kude kube kulandelwe imigaqo yokhuseleko kunye nemigaqo-nkqubo. INkosana uHarry kunye noMeghan
Emva kokulinda ixesha elide, abasebenzi basekhaya bavunyelwe ukuba babuyela emsebenzini benze ingeniso. UPatel ukwakhankanye ukuba uninzi lwamanye amashishini aya kwenza ukubuyela phantsi kwenqanaba 3. Ngaphandle kweendawo zokutyela, iindawo zokuzonwabisa kunye nezixhobo zokuzonwabisa, uninzi lwamanye amashishini aya kubuyela kwigreyidi.
4. UTrump ulungiselela ukujonga ukujoliswa kukhuseleko kwimidiya yoluntu
UTrump unembali ende yokwenza amabango kwi-Twitter abagxeki bakhe bathi bayalahlekisa okanye bathetha ngokungalunganga; UTrump uyakhanyela impazamo
Mongameli waseMelika uDonald Trump Kulindeleke ukuba iyalele uphononongo lomthetho kudala ikhusela i-Twitter, i-Facebook, kunye ne-Alfabhethi kaGoogle ekubeni babe noxanduva lwezinto ezithunyelwe ngabasebenzisi babo, ngokomyalelo wedrafti yomthombo kunye nomthombo oqhelene nemeko leyo.
Iindaba zomyalelo ziza emva kokuba uTrump esongele ukuvala iiwebhusayithi watyhhola ngokuthintela amazwi axhasayo kulandela ingxabano ne-Twitter emva kokuba inkampani igqibe ukummaka iiTweets zikaTrump malunga nezityholo ezingagunyaziswanga zobuqhetseba malunga nokuvota ngeposi ngesilumkiso esazisa abafundi ukuba bahlole izithuba.
Umongameli akakwazi kulawula ngokunganyanzelekanga okanye avale iinkampani, eziza kufuna inyathelo yiKhomishini yase-US okanye iKhomishini yoNxibelelwano yaseburhulumenteni (iFCC). NgoLwesithathu, amagosa athi uTrump uza kutyikitya i-Executive Executive kwiinkampani zemidiya yoluntu ngoLwesine. INkosana uHarry kunye noMeghan
Umongameli uTrump utyobele isigunyaziso sesigqeba namhlanje, ngoLwesine, efuna ukukhawulela ukukhuselwa okusemthethweni okubonelela ngomthetho-siseko kwezonxibelelwano nakwamanye amaqonga e-Intanethi, intshukumo kulindeleke ukuba idale imiceli mngeni kwangoko eyayivumileyo.
Ukuyalelwa kukaTrump kuya kuvula indlela yokuba iiarhente zase-US ziphinde ziphinde zikwazi ukubuyisela ukhuselo lwezomthetho ekudala zaziwa njengeCandelo lama-230, elishiya oongamileyo bezobuchwephesha ekubeni babe noxanduva lokuqulatha abakuvumela kwi-Intanethi nakwizigqibo zabo zokumodareyitha. Umyalelo ngqo unokuvula umnyango weKhomishini yoNxibelelwano yase-Federal ukuba baphinde bacinge ngomthetho, abantu abawaziyo amaxwebhu bathe. Utshintsho lunokuba nefuthe elimandla lokuthetha ngokukhululekileyo kunye neziphumo ezibanzi zokuhamba ngokubanzi kweenkampani ezixhomekeke ekwenzeni ushishino kwi-Intanethi.
5. I-Premier League ukuze iphinde iqale ngomhla we-17 kweyeSilimela neMan City v iArsenal neVillaff Shed Utd
I-Liverpool bayasukela isihloko sabo sokuqala seligi kwiminyaka engama-30 kodwa baya kuyenza emva kweminyango evaliweyo
Ixesha lePremier League limiselwe ukuba liqalise kwakhona nge-17 kaJuni ngeAston Villa vs Sheffield United neManchester City vs Arsenal. Umdlalo yimidlalo emibini esesandleni. Uluhlu olupheleleyo lwezinto eziza kwenziwa emva koko luya kudlalwa ngeempelaveki ye-19 kaJuni.
Iiklabhu zayixoxa le nto kwintlanganiso ngoLwesine. Kuyaqondwa ukuba bonke bavumile ngokomgaqo okwangoku. Kukho izinto ezingama-92 ezizakudlala.
IPremier League yamiswa ngomhla we-13 ku-Matshi ngenxa yobhubhane kwaye iyakuba ziintsuku ezili-100 emva kokuba iLeicester City iphumelele ngo-4-0 i-Aston Villa nge-9 Matshi apho ukhuphiswano luza kuphinda luqale, kunye nemidlalo ngoku emva kweengcango ezivaliweyo.
IVeki yeendaba yethu yoSuku lweeVeki ikuzisa isishwankathelo sezihloko ezintlanu ezishushu namhlanje ezibandakanya iindaba zakutshanje eNigeria, iindaba zase-Afrika, iindaba zezopolitiko, iindaba zamazwe aphesheya, iindaba zaseHollywood, iindaba zemidlalo, kunye neendaba zabantu abadumileyo baseNigeria kunye nosaziwayo baseAfrika. Kwakhona, lindela amanye amabali aphezulu kunye nezinye iindaba ezihambahambayo zakutshanje namhlanje eSahara. Isishwankathelo seendaba zamva nje zaseNigeria t
Uhlobo Rave Ngamana 28, 2020